I-Ansys Workbench 2020 Ikhosi- iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/I-Ansys Workbench 2020 yeKhosi
I-Ansys Workbench 2020 R1
Kwakhona i-AulaGEO izisa umnikelo omtsha woqeqesho kwi-Ansys Workbench 2020 R1-Uyilo kunye nokulinganisa. Ngekhosi, uya kufunda iziseko ze-Ansys Workbench. Ukuqala ngentshayelelo, siya kuba noqwalaselo olukhawulezayo lohlalutyo oluya kugutyungelwa kuyo yonke ikhosi.
Siza kujonga ujongano olusisiseko lwesoftware, ekhokelela kumanyathelo aliqela aqala ngedatha yobunjineli, emva koko ijometri (Ibango lesithuba) kunye nemodeli (Ansys Mechanical). Iindidi ezahlukeneyo zohlalutyo ziya kufundiswa, kubandakanya ukwakheka okungagungqiyo, imo, imvamisa ye-harmonic, imeko ye-thermal ethe ngcembe, eyokufudumeza yethutyana, kunye nohlalutyo lokukhathala.
uhlalutyo lwezinto ezigqityiweyo
Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso Iikhosi zeempendulo Iikhosi zoYilo zoMatshini